Ilaahay Baa Reer Binu Israaʼiil Samatabbixiyay | Farriinta Kitaabka
Ilaahay Baa Reer Binu Israaʼiil Samatabbixiyay
Yehowah belaayooyin buu Masar ku inkaaray oo Muuse baa reer binu Israaʼiil ka soo saaray dalkaas. Ilaahay Muuse buu Sharci ugu gudbiyay reer binu Israaʼiil
WAQTII aad u dheer bay reer binu Israaʼiil degganaayeen Masar oo dalkaas aad bay ugu barwaaqoobeen oo ugu tarmeen. Haddaba boqor cusub baa meeshaas ka kacay. Fircoonkan Yuusuf ma oqoon nin xun oo dulmi badan ayuu ahaa. Wuxuu ka cabsaday siday reer binu Israaʼiil u badnaadeen oo wuu addoonsaday. Wuxuuna amray in wiil kasta ay dhalaan Webiga Niilka lagu tuuro siday u dhintaan. Haddaba hal hooyo baa si geesinimo ah ilmaheedii yaraa u ilaalisay. Waxay ku ridday dambiil oo cawska webiga bay ku qarisay. Kaddib gabadhii Fircoon baa heshay yarkii. Muuse bay u bixisay waxayna ku dhex korisay boqortooyada dalka Masar.
Markuu Muuse 40 sano jiray dhibaato buu la kulmay isagoo addoon Israaʼiili ah ka daafacayo Masri cadaadinayo. Sidaa darteed Muuse wuxuu u fakaday dal fog oo meeshaas buu qariib ku ahaa. Markuu 80 sano jiray Yehowah baa dib ugu diray Masar siduu Fircoon ugu yiraahdo dadka Ilaahay sii daa.
Fircoon si cad buu u diiday dalabkii Muuse. Saas awgeed Ilaahay toban belaayooyin buu Masar ku inkaaray. Belaayo walba markay dhacday Muuse Fircoon buu hor istaagay oo wuxuu siiyay fursad uu uga baxsado belaayada soo socota. Haddaba Fircoon wuu dhego adkaaday oo Muuse iyo Ilaahiisa Yehowah wuu quudhsaday. Ugu dambeyntii Ilaahay baa belaayadii tobnaad ku laayay curadyadii dalka Masar oo dhan. Laakiin waxaa badbaaday reerihii Yehowah dhegeystay oo dhiigga wankii allabariga mariyay dhinacyada albaabadooda. Sidaas darteed malaaʼigtii baabbiʼiyaha ahayd guryahaas way kor martay. Markaas kaddib sanad walba reer binu Israaʼiil waxay iideen Iidda Kormaridda siday u soo xusuustaan samatabbixintan cajaaʼibka leh.
Fircoon markuu curadkiisii ka dhintay wuxuu ku amray Muuse iyo reer binu Israaʼiil oo dhan inay ka baxaan Masar. Isla markiiba waxay qabanqaabiyeen Baxniintii. Haddaba Fircoon goʼaankiisii wuu ka soo noqday. Dagaalyahan iyo gaadhifardo buu ku ceersaday oo ilaa Badda Cas buu ka daba tagay. Reer binu Israaʼiil waxay soo gaareen xeeb oo waxay u ekayd inay meel ay u baxsadaan jirin. Yehowah Badda Cas wuu kala goʼyay. Reer binu Israaʼiilna dhulkii badda oo engegnaa bay cag ku mareen. Biyihiina sidii derbi bay xagga midigta iyo bidixda uga xigeen. Masriyiiintii markay ka daba yimaadeen Ilaahay baa biyihii ku soo dumiyay. Fircoon iyo ciidankiisiiba way dhinteen.
Dabadeed reer binu Israaʼiil waxay teendhooyin ka dhisteen Buurta Siinay oo Yehowah axdi buu iyaga la dhigtay. Ilaahay reer binu Israaʼiil wuxuu siiyay sharciyo noloshooda tilmaan siiya oo dhawra. Muusena wuxuu ka dhigay dhexdhexaadiye. Haddii ay reer binu Israaʼiil si daacad ah Ilaahay xukunkiisa aqbalaan Yehowah iyaga wuu la jiri lahaa oo iyaga dartood quruumaha kale wuu barakeyn lahaa.
Haddaba reer binu Israaʼiil badankooda Ilaahay bay aammindarradoodii ku xumeeyeen. Sidaa darteed Yehowah wuxuu dadka qarnigaas ka dhigay inay 40 sanadood cidlada ku warwareegaan. Kaddibna Muuse wuxuu la dardaarmay Yashuuca oo ahaa nin qumman inuu xilka qaadan doono. Dhammaadkiina reer binu Israaʼiil diyaar bay u ahaayeen inay galaan dhulkii uu Ilaahay Ibraahim u ballanqaaday.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Baxniintii; Laawiyiintii; Tirintii; Sharciga Kunoqoshadiisa; Sabuurradii 136:10-15; Falimaha Rasuullada 7:17-36.
Sidee buu Ilaahay u isticmaalay Muuse inuu reer binu Israaʼiil samatabbixiyo?
Iidda Kormaridda xaggee bay ka timaadday?
Sidee buu Yehowah reer binu Israaʼiil uga xoreeyay addoonnimadii Masar?
Muuse waxaa reer binu Israaʼiil loogu dhiibay in ka badan 600 oo sharci. Waxaana laga yaaba in Tobankii Qaynuun oo lagu qoray Baxniintii 20:1-17 ay ugu caansanaayeen. Haddaba Ciise Masiix markii la weyddiiyay qaynuunnada Ilaahay middee baa ugu weyn wuxuu yiri: “Waa inaad Rabbiga [Yehowah] Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan, iyo naftaada oo dhan, iyo caqligaaga oo dhan, iyo xooggaaga oo dhan.”—Markos 12:28-30; Sharciga Kunoqoshadiisa 6:5.
Wadaag Wadaag Ilaahay Baa Reer Binu Israaʼiil Samatabbixiyay